Izindaba - Kuthiwani ngamakhethini we-kangyuan's urinary
Abangani abaningi abasebenza emkhakheni wezinto ezisetshenziswayo zokwelashwa bangibuza, siyini isizathu esenza ukuthi ama-catheters kaKangyuan abe nomchamo omuhle kangaka futhi angathengwa kahle eYurophu, eMelika, e-Southeast Asia nakwamanye amazwe amaningi? Ake sikhulume ngakho namuhla.
Okokuqala, impahla eluhlaza
Tube Ityhubhu yecatheter yomchamo kaKangyuan yenziwa ngo-100% wezinto ezingavuthiwe eziqinile ezingenisiwe, ezine-inertia enhle kakhulu yomzimba, ayinambitheki, ayinabuthi, ayonakalisi, i-anticoagulant, antioxidant, biocompatibility, futhi ingamelana nezimo ezinzima zokubulala amagciwane nezimo zokuvala inzalo, futhi ukuhlangabezana nezidingo zebanga lezokwelapha.
♦ Ngokwe-silicone ewuketshezi evundiswe ngeplathinamu, imijondolo inokukhanya okucacile nokuqina, ngeke ize iphuzi ngaphambi kosuku oluphelelwa yisikhathi.
Lo Ibhaluni licindezelwe yisikhunta esiqinile esihlanzwe nge-platinamu, esinamazinga okushisa aphansi nesikhathi esinde. Izici zezinto zebhaluni zikhulisiwe. Ukunwebeka okuhle nokuhoxa kuqinisekisa ukuthembeka kwekhwalithi yebhaluni, futhi ingaphezulu lebhaluni libushelelezi ngemuva kokuhoxa.
Guide Inhloko yomhlahlandlela wama-catheters we-Kangyuan womchamo wenziwe nge-gel abicah gel, equkethe i-barium sulfate engeyona enobuthi, engathwetshulwa yi-X-ray in vivo ukukhomba ukujula kokufakwa komzimba we-catheter.
Okwesibili, izinqubo zokukhiqiza
Ipayipi ngalinye likaKangyuan le-urinary catheter lidinga ukulandela izinqubo eziningi kanye nokuhlolwa okuphelele okwenziwa ngamanyuwali amane, kufaka phakathi ukuxubana kwempahla engavuthiwe, i-extrusion, i-vulcanization, ukucindezela ukubunjwa kwama-funnels, ukuhlolwa kwe-funnels, ukuvula imbobo kushubhu lokufaka ibhaluni, ukubumba ibhaluni, ukuhlolwa kwamabhaluni, ukufaka ibhaluni uphawu, ukuxhumeka okungenamthungo kwethiphu kanye nenshubhu, umhlahlandlela wephoyinti, ukuphrinta, ukubhoboza umgodi wamanzi, ukuhlolwa kwangaphakathi, ukuhlanza, ukomisa, ukufaka nokupaka inzalo. Ubuchwepheshe obuhle futhi obuyingqayizivele namalungelo empahla yengqondo ezimele anquma ikhwalithi enhle kakhulu. Futhi wehlise kakhulu ubuhlungu obubangelwa ukufakwa kwe-catheter, unciphise ukuvela kokutheleleka komgudu womchamo, futhi uthuthukise ukwamukelwa kweziguli. Abantu baseKangyuan baphatha inqubo ngayinye ngesimo sengqondo esinzima, emihle kuyo yonke imininingwane, futhi balwela ukufezekisa ikhwalithi engcono kakhulu yayo yonke ipayipi lomchamo.
Okwesithathu, izinhlobo zama-catheters womchamo
2 indlela round abicah abicah catheter foley izingane kanye nabantu abadala, 3 indlela nxazonke tipped abicah catheter foley abadala, 2 indlela round rounded futhi embozwe abicah catheter foley abadala, 3 indlela nxazonke ezinamaphiko futhi embozwe abicah catheter foley kubantu abadala, 2 indlela tiemann tipped ipayipi le-silicone foley lezingane nabantu abadala, i-3 way tiemann tipped silicone foley catheter yabantu abadala, 2 way open evulekile abicah coleter coleter yezingane nabantu abadala, 2 way silicone foley catheter with balloon ebalulekile yezingane nabantu abadala, 2 way silicone foley catheter with temperature cwaninga izingane kanye nabantu abadala.